Hargeysa”Istaannada Basaska Laga Raaco Oo Noqday Xerada Dhalinyarada Dadka Dhaca | Berberatoday.com
Hargeysa”Istaannada Basaska Laga Raaco Oo Noqday Xerada Dhalinyarada Dadka Dhaca
Hargeysa(Berberatoday.com)-Goobaha ay ka rakaabsadaan Basaska iskaga kala goosha xaafadaha magaalada Hargeysa, ayaa noqday goobaha ay u soo tuugo tagaan Dhalinyarada Habeenkii Bulshada ka qaada Moobillada iyo alaabooyinka kale ay sitaan.
Goobahan oo aad u mashquul badan marka ay bulshadu raaceyso Basaska ayaa waxaa inta badan dadkaasi kusoo dhuuntay tuugta kuwaasi oo la baxsada Moobilada ay ka qaataan Bulshada rakaabka ah ee Basaska , waxaana imika dhalinyaradaasi ay bilaabeen in iyagoo Mindiyo sita ay baska dhexdiisa dadka kaga qaadaan ama ku dhacaan rakaabka.
Dhalinyaradani ku mabbay Moobilada ay kala cararaan bulshada ayaa sidoo kale dadka ku baadha goobaha madowga ah ee xaafada Hargeysa, iyadoo dadka laga qaato alaabta iyo hadba wixii laga helo, qofkii laga waayana waxaa ay u jidhkiisa gaadhsiiyaan nabaro.
Goobaha ay aad ugu soo badatay Dhalinyaradan moobilada dadka kala carara ah ayaa ah Istaanada Basaska ee Idaacada, Xero Awr, Sheekh Mubaarig, Cabaaye, Calaamaha, Kiledhka iyo Istaanka Basaska ee Xaafada New Hargeysa ee faras magaalada Hargeysa.
Ciidamada amniga ayaan waxba kala socon xaallaha ay dhalinyaradani ku hayso Goobahan Bulshada muhiim u ah ee ay dhibaatada kala kulanto.